Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Axad Ah | Laacib.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Axad Ah
January 26, 2020 Balaleti Comments Off on Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Axad Ah
Bishan January ee dhamaadka ku dhow ayey ku egtahay xilliga suuqa iibka ciyaartoyga ee jiilaalka, waxaana ay kooxuhu haystaan muddo kooban oo ay kaga faa’iidaysan karaan.
Sidii aad nooga barateen, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa xantii suuqa iyo hadal-hayntii ugu dambaysay ee ay maanta oo Axad ah qoreen wargeysyada waaweyn ee Yurub.
Cinwaannadii ugu waaweynaa ee maanta ay wargeysadu ka qoreen suuqa iibka iyo xanta laacibiinta baxaya ama imanaya ayaa waxa ka mid ahaa:
Tottenham ayaa ka shaqeyneysa heshiis joogta ah oo kooxda ku soo celinaya weeraryahanka reer Wales Gareth Bale ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga bisha Janaayo isbuucaan iyagoo wadahadal kula jira kooxda Real Madrid. (Daily Express)
Manchester United ayaa go’aansan karta inay ceyriyaan tababare Ole Gunnar Solskjaer haddii natiijooyinka ay fiicnaan waayaan inta ka harsan xilli ciyaareedkan, iyadoo tababaraha xulka England Gareth Southgate uu ugu cadcad yahay inuu bedelo. (Daily Mail)
Machester United ayaa u dhaqaaqi doonta saxiixa daafaca bidix ee xulka England iyo kooxda Leicester City Ben Chilwell oo 23 sanno jir ah xagaaga. (Metro)
Barcelona ayaa la filayaa inaysan sii ceyrsan doonin weeraryahanka Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, waxayna diirada saari doonaan kaliya weeraryahanka Valencia Rodrigo Moreno oo 28 sanno jir ah. (Sport)
Si kastaba, Aubameyang ayaa diirada u saaran kooxda Paris Saint-Germain kuwaasoo u arka inuu yahay bedelka Edinson Cavanai. (Foot Mercato)
Cavani oo lala xiriiriyay kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa heshiis afka ah la gaaray Atletico Madrid oo la filayo inuu ku biiro ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga isbuucaa. (Goal)
Cavani ayaa iska diiday dalab uu sannadkii 10 milyan ginni ku qaadanayo iyo weli lacag badan oo abaalmarin ah oo ay u soo bandhigtay Manchester United. (Daily Mirror)
Arsenal ayaa ku dhow inay dhameystirto saxiixa 26 jirka daafaca kooxda Flamengo Pablo Mari. (Daily Mail)
Manchester United ayaa diidan inay hoos u dhigto qiimaha 25ka milyan ginni ee ay dul saareen daafaca dhexe Chris Smalling iyadoo Roma ay dooneyso inay heshiiska ka dhigto mid joogta ah madaama uu amaah ku joogo kooxda haatan. (The Sun)
Manchester United ayaa weli xiiseyneysa xiddiga khadka dhexe ee Sporting CP Bruno Fernandes laakiin labada kooxood ayaan weli awood u laheyn inay lacagta ku heshiiyaan. (A Bola)
Marcos Rojo ayaa dib ugu laabanaya kooxdiisa hore ee Argentina ee Estudiantes isagoo amaah ku tagaya ka dib markii Man United ay ku guuldareysatay inay hesho koox iibsata daafaca 29 sano jirka ah. (Daily Mirror)
Newcastle ayaa rajeyneysa inay ku garaacdo Valencia saxiixa xiddiga Borussia Dortmund Paco Alcacer kaasoo heshiis amaah ah lagu qaadan karo. (The Sun)
Xiddigii hore ee Arsenal iyo Manchester United Robin van Persie oo 36 sanno jir ah ayaa shaaca ka qaaday in Vincent Kompany uu weydiistay inuu ku soo laabto garoomada oo uu kula soo biiro Anderlechr. (HLN)